सहिमाको “ओक्कल दोक्कल” युट्युब न. १ ट्रेण्डिङमा पर्न सफल (भिडियो सहित) - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७७ कार्तिक १४ गते ९:३८ मा प्रकाशित
काठमाडौं : चर्चित गायिका सहिमा श्रेष्ठ र गायक सन्दिप न्यौपानेको डान्सिङ बिटमा रहेको नयाँ गित “ओक्कल दोक्कल” को म्युजिक भिडियो युट्युब न. १ ट्रेण्डिङमा परेको छ। भिडियो सार्बजनिक भएको छोटो समयमा लाखौ दर्शक श्रोताहरुको माया बटुल्न सफल भएकोमा गायिका सहिमा श्रेष्ठ अहिले दङ्ग छिन। नेपाल देखि विदेश सम्म हुने मनोरन्जनात्मक कार्यक्रममा सँधै ब्यस्त रहने गायिका लकडाउनमा समेत दर्जनौ गीतहरुमा आफ्नो स्वर दिएर चर्चामा रहिन। दर्जनौ चर्चित गीतहरुमा सुमधुर आवाज भरेर दर्शक श्रोताहरुको मन मुटुमा बस्न सफल गायिका सहिमा र गायक सन्दिप न्यौपाने पछिल्लो समय चर्चामा रहेका छन्। बालापनको यादलाई ताजा गराउंदै उनीहरुले दशैं कोसेली स्वरुप नवमीको दिन भिडियो रिलिज गरेका हुन्।